रारा पुगेर के भने प्रधानमन्त्रीले ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ | mulkhabar.com
रारा पुगेर के भने प्रधानमन्त्रीले ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
April 14, 2018 | 9:47 am 241 Hits
काठमाडौं, १ बैसाख –
नयाँ वर्ष २०७५ को अवसरमा धर्तीकी परीको रुपमा परिचित नेपालको रारा पुगेर प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले राष्टको नाममा सम्बोधन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाली आफैंले धेरै गर्न सक्ने बताउँदै आफूले आफ्नै कार्यकालमा समृद्ध नेपाल बनाउने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान सफल कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको बताउँदै देशमा स्थायित्वको नयाँ चरण आरम्भ भएको उल्लेख गरेका छन्।
नयाँ वर्षको आरम्भ कर्णाली प्रदेशबाट हुनुको एउटा अर्थ, हामी आज कहाँ उभिएका छौं, हाम्रो यात्रा कुन हो र हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संकल्पलाई स्पष्ट पार्न पनि हो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को हाम्रो संकल्पलाई कर्णालीसँगै सिङ्गो नेपालको समृद्धिले मात्रै सार्थक तुल्याउन सक्छ। मैले जस्तासुकै प्रतिकूलताको सामना गरेर आफ्नो स्वाभिमान र स्वाधीनता कायम राख्न सफल हाम्रो राष्ट्रको विवेकपूर्ण फैसलाको रुपमा बुझेको छु।
हामीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारामा अभिव्यक्त गरेका छौं। सरकार विकासका गतिलाई योजनावद्ध ढंगले अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ। त्यसका निम्ति देश भित्रको प्राकृतिक र मानव श्रोत, पूँजी र सीप परिचालन गर्न सबै सामथ्र्यका साथ सरकार केन्द्रीत हुनेछ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।